ဆံပင္အေရာင္ ထပ္ေျပာင္းလိုက္ျပန္တဲ့ ပရိသတ္အခ်စ္ေတာ္ ေဖြးစိန္ေလး
16 Aug 2018 . 3:41 PM
ပရိသတ္အခ်စ္ေတာ္ အကယ္ဒမီမ်ားရွင္ေလး ေဖြးေဖြးဟာ သရုပ္ေဆာင္ရင္ ဇာတ္ေကာင္ကာရိုက္တာမ်ိဳးစံုကို ပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏုိင္သရုပ္ေဆာင္ႏုိင္သလိုပဲ ဆံပင္အေရာင္ေျပာငး္လဲရာမွာလည္း ပရိသတ္ေတြ မ်က္စိိလည္ေလာက္ေအာင္ကုိ ေျပာငး္လဲႏုိင္သူပါ။
ျပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္လကုန္ေလာက္ကမွ ဆံပင္အေရာင္တစ္ခါေျပာငး္ထားတဲ့ ေဖြးစိန္ေလးဟာ အခုတစ္ခါလည္း ဆံပင္အေရာင္ေလး ေျပာင္းျပီး ပံုစံအသစ္နဲ႔ ခ်ျပလိုက္ျပန္ပါျပီ။ ဘာအေရာင္ျဖစ္မယ္ ထင္လဲ၊ ပရိသတ္ၾကီးေရ။ ဒီတစ္ခါေတာ့ Peachy Rosegold အေရာင္ေလးပါတဲ့။ မက္မြန္သီးအေရာင္ေလးကိုမွ Rosegold ေလးနဲ႔ ေရာျပီး ဆန္းဆန္းေလး ဆုိးလိုက္တာပါ။
ကာလာအသစ္နဲ႔ လွေနတဲ့ ေဖြးေဖြး
“In Love with my Peachy Rosegold Hair !!!
Layers by layers..
Peach ေလးတလႊာ.. RoseGold ေလးကိုတလႊာ
Yayyyyyy!!!! Finally …..
Thank You T Cho T Khine & HELLO Beauty Team!!
Sweet Night My Dearest !!
#hairporn #haircrazy #Rita #Peach #Rosegold” ဆိုျပီး သူ႔အေကာင့္မွာ တင္ထားခဲ့ပါတယ္။
ေဖြးစိန္ေလးရဲ႕ ကံေကာင္းတဲ့အခ်က္ကေတာ့ ဘာဆံပင္အေရာင္ပဲဆုိးဆုိး သူနဲ႔ က် လိုက္ဖက္ျပီး လွေနတာပါပဲ။
ေလဆိပ္မွာ ေတြ႔ရတဲ့ ေဖြးေဖြးနဲ႔ ဦးခင္လႈိင္
အခုလည္းဆံပင္အေရာင္အသစ္ေလးဆိုးျပီး ပခုကၠဴကို ဒိုးသြားျပီမို႔ ပခုကၠဴက ပရိသတ္ေတြ သိေအာင္ လက္တုိ႔လုိက္တယ္ေနာ္။
ဆံပင်အရောင် ထပ်ပြောင်းလိုက်ပြန်တဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် ဖွေးစိန်လေး
ပရိသတ်အချစ်တော် အကယ်ဒမီများရှင်လေး ဖွေးဖွေးဟာ သရုပ်ဆောင်ရင် ဇာတ်ကောင်ကာရိုက်တာမျိုးစုံကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သရုပ်ဆောင်နိုင်သလိုပဲ ဆံပင်အရောင်ပြောင်းလဲရာမှာလည်း ပရိသတ်တွေ မျက်စိလည်လောက်အောင်ကို ပြောင်းလဲနိုင်သူပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လကုန်လောက်ကမှ ဆံပင်အရောင်တစ်ခါပြောင်းထားတဲ့ ဖွေးစိန်လေးဟာ အခုတစ်ခါလည်း ဆံပင်အရောင်လေး ပြောင်းပြီး ပုံစံအသစ်နဲ့ ချပြလိုက်ပြန်ပါပြီ။ ဘာအရောင်ဖြစ်မယ် ထင်လဲ၊ ပရိသတ်ကြီးရေ။ ဒီတစ်ခါတော့ Peachy Rosegold အရောင်လေးပါတဲ့။ မက်မွန်သီးအရောင်လေးကိုမှ Rosegold လေးနဲ့ ရောပြီး ဆန်းဆန်းလေး ဆိုးလိုက်တာပါ။
ကာလာအသစ်နဲ့ လှနေတဲ့ ဖွေးဖွေး
Peach လေးတလွှာ.. RoseGold လေးကိုတလွှာ
#hairporn #haircrazy #Rita #Peach #Rosegold” ဆိုပြီး သူ့အကောင့်မှာ တင်ထားခဲ့ပါတယ်။
ဖွေးစိန်လေးရဲ့ ကံကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ ဘာဆံပင်အရောင်ပဲဆိုးဆိုး သူနဲ့ ကျ လိုက်ဖက်ပြီး လှနေတာပါပဲ။
လေဆိပ်မှာ တွေ့ရတဲ့ ဖွေးဖွေးနဲ့ ဦးခင်လှိုင်
အခုလည်းဆံပင်အရောင်အသစ်လေးဆိုးပြီး ပခုက္ကူကို ဒိုးသွားပြီမို့ ပခုက္ကူက ပရိသတ်တွေ သိအောင် လက်တို့လိုက်တယ်နော်။